Ady amin’ny tsy fandriampahalemana : olana ny firaisana tsikombakomban’ny tompon’andraikitra | NewsMada
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana : olana ny firaisana tsikombakomban’ny tompon’andraikitra
Anisan’ny olana amin’ny ady amin’ny jiolahy ny firaisana tsikombakomban’ny mpitandro filaminana, ny mpiandry fonja sy ny fitsarana amin’izy ireo. Tranga maro nahitana izany, ka anisany ny resaka kidnapping.
Nahitsy ny avy amin’ny zandary, omaly nandritra ny fivoriana niarahan’ny tompon’andraikitra ny filaminana, nilaza fa anisan’ny mampanano sarotra ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana ny firaisana tsikombakomba eo amin’ny jiolahy sy ny mpitandro filaminana, ny tompon’andraikitra eny amin’ny fonja sy ny fitsarana. Niatrika izany fivoriana teny amin’ny toby Ratsimandrava izany ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny skreteram-panjakana miahy ny zandarimaria, ny kaomandin’ny zandarimaria, ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Cemgam, ny avy amin’ny minisiteran’ny fitsarana.
Nanome ohatra mihitsy moa ny avy amin’ny zandary momba an’i Jean Freddy, izay gadra eny Tsiafahy, kanefa tafiditra amin’ny fakana an-keriny tany Toamasina sy Mahajanga. Teo ihany koa ny nahatafidiran’ny mpiandry fonja telo lahy tamin’ny asan-jiolahy tany Farafangana tany. Nanindry paingotra manokana ho an’ny minisiteran’ny Fitsarana mihitsy ny avy amin’ny zandary hijerena manokana ny momba ireo mpiasan’ny fonja sy ny fitsarana miray tsikombakomba amin’ny jiolahy.
Nivoitra ihany koa fa anisan’ny olana amin’ny asan’ny mpitandro filaminana ny fidirana sy ny sakantsakana ataon’ny olom-boafidy sy ny tompon’andraikitra samihafa. Manampy trotraka ny tsy fandraisana andraikitry ny minisitera hafa, ny mpanao politika, sns. Ireo amin’ny ankapobeny ny olana sedrain’ny mpitandro filaminana amin’ny fanatanterahana ny asany.
Nilaza ny kaomandin’ny zandarimaria fa tsy mora ny asa, ny tsy fahampian’ny olona sy ny fitaovana. “Ny fitaovana entin’ny mpanao ratsy efa mifanahantsahana ny an’ny mpitandro filaminana. Tsy miandry izay tsy fahampiana anefa ny mpitandro filaminana fa miezaka mandrakariva amin’ny asa ataony”, hoy izy. Samy nilaza ireo tompon’andraikitra ambony fa ho taon’ny asa ity taona 2016 ka samy handray andraikitra amin’ny eo ambany fifehezany avy. Miandry izay vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ireo tompon’andraikitry ny filaminana ireo ny vahoaka.